एमबाप्पे लिभरपुल आउने चर्चा !
अब को बन्ला चेल्सी क्लबको नयाँ प्रशिक्षक ?
चेल्सीले अन्ततः बर्खास्त गर्यो प्रशिक्षक फ्रांक लाम्पार्डलाई
रोड्जर्सलाई प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिने तयारीमा चेल्सी !
रोनाल्डोको विकल्पमा रियलले किन्न सक्छ यी खेलाडीहरु ?
काठमाडौँ । नौ वर्ष रियल मड्रिडमा बिताएपछि स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले रियल मड्रिड छोड्ने निर्णय गरे ।